ခံစားချက်အဆိုးအကောင်း (Negative Emotions) - Myanmar Network
ခံစားချက်အဆိုးအကောင်း (Negative Emotions)
Posted by zar ni (My Way!) on November 5, 2012 at 8:45 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူရယ်လို့ဖြစ်လာချိန်မှာ လောကဓံတရားကြောင့် စိုးရိမ်သောကရောက်ရတာတွေ ၊ ၀မ်းနည်းရတဲ့အချိန်တွေရှိသလို ၀မ်းသာစရာခံစားချက်ရှိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတာပေါ့။ အဆိုးတွေ အမြဲမရှိသလို အကောင်းတွေကိုလည်းအမြဲမျှော်လင့်လို့မရဘူးလေ။ လူ့ခံစားချက်ဆိုတာ ရိုလာကိုစတာစီးသလို မြင့်နေရာကနေ ၀ုန်းကနဲအောက်ကိုထိုးဆင်းသွားချင်သွားတာမျိုးဆိုတာ လူ့ဘ၀မှာတစ်ရက်ပိုနေလာတာနဲ့ ပိုသဘောပေါက်လာသလိုလိုပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ခင်မင်သိကျွမ်းခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက် ဗြုန်းစားကြီး မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းရတတ်ပါတယ်။ သူဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုတာကိုသိချင်စိတ်ကကြီးစိုးနေတော့ “One reasonadog can be suchacomfort when you're feeling blue is that he doesn't try to find out why” ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးသွား သတိရ မိပါတယ်။
negative emotions တွေဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုထိထိမိမိဖော်ပြနိုင်အောင် သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေ၊ ဝေါဟာရလေးတွေလေ့လာကြည့်ရအောင်။
If you're "disappointed", you're sad because something hasn't happened the way
"I was really disappointed that my team didn't qualify for the final."
ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလိုမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ရတာပေါ့။ passive form နဲ့သုံးလေ့ရှိတယ်။
I was disappointed . . . ဆိုရင်စိတ်ပျက်ရသူကကိုယ်
I am disappointing . . . လို့မှားသုံးရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပျက်စရာကြီးဖြစ်သွားမယ်။
The result is disappointing. ဆိုရင်တော့ ရလာဒ်ကစိတ်ပျက်စကောင်းတယ်ပေါ့။
Anxious (စိုးရိမ်ကြောင့်ကြသော၊ ဆန္ဒစောနေသော)
If someone is "anxious", they're nervous or worried about something.
"We're fairly anxious about the situation as it could really affect our business."
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြတယ်ဆိုတာ ရင်ဖိုနေတာ(nervous)၊ တစ်ခုခုအပေါ်သောက ရောက်နေတာ(worried) မျိုးပေါ့။
If someone is "ashamed", they feel bad because they've done something silly or bad and they're worried what other people will think.
"He was ashamed of the way he'd spoken to them the night before."
မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတစ်ခုခုလုပ်မိရင်၊ လူပုံအလယ်မှာမပြော သင့်တဲ့စကားလွှတ်ကနဲ ထွက်သွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်လူတွေဘယ်လိုများထင်ကြမလဲတွေးရင်းနဲ့ အရှက်ကြီးရှက်မိကြမှာပေါ့။
Defiant (အာခံသော၊ ဖီဆန်လိုသော)
If someone is "defiant", they won't do what other people want them to do.
"He remained defiant and refused to accept any changes to the plan.
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လူကြီးတွေကခိုင်းလာတဲ့အခါ defiant ဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ခဏခဏ defiant ဖြစ်နေရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။
If someone is "Depressed", they're feeling very sad and bad and they don't want
"He's been depressed ever since his cat died."
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပြီဆိုရင် ဘာမှမလုပ်ချင်မကိုင်ချင်နဲ့ချောင်ကလေးတစ်နေရာမှာ တစ်ကိုယ်တည်းငိုင်နေ ချင်တတ်ကြတယ်။ အသက်တွေကကြီးကြီးလာလေ ဘ၀တွေက သေးသေးလာတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက နေရာပေါင်းစုံကနေဖြစ်လာကြတယ်။ အလုပ်ရှိသူက အလုပ်ပြုတ်သွားရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ဖိစီးတယ်၊ ချစ်သူရည်းစားရှိသူက သူ့ခြေလှမ်းတွေမရိုးသားဘူး လို့ထင်တဲ့အခါမှာ သူဖောက်ပြန်သွားရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်ဖိစည်းတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း စာမေးပွဲဆိုတဲ့နတ်ကြီးကချောက်လှန့်လွန်းလို့ စိတ်ဖိစီးတယ်။ အသက်တွေကြီး ဘွဲ့တွေနှစ်ခုသုံးခုရပြီးလို့အလုပ်ခွင်ထဲရောက်နေတာတောင် ညညဆို စာမေးပွဲမမှီလိုက်ဘူး၊ ဖြေရမည့်ဘာသာနဲ့ကျက်သွားတဲ့ဘာသာလွဲနေတယ်ဆိုတယ့် အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတုန်းပါပဲ။
If you're "disgusted", you feel angry/offended about something.
"I'm disgusted with the way they treated us."
အမုန်းတရားနဲ့ရွံရှာစက်စုပ်တဲ့ခံစားချက်ဟာတွဲနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်ဆက်ဆံလိုက်ပုံကို တွေးပြီး တစိမ့်စိမ့်နဲ့ရွံရှာမိတဲ့အခါ ဒေါသဟာဖွဲမီးလိုရင်ကိုတမြေ့မြေ့လောင်ကျွမ်းစေတတ်ပါတယ်။
Upset (စိတ်မချမ်းသာ၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်၊ စိတ်တို)
If someone is "upset", they're sad/angry/disappointed because something bad has happened to them.
"He was upset because they didn't invite him to the party."
Frightened/scared (ကြောက်လန့်၊ တုန်လှုပ်)
If you're "frightened" or "scared", you think that you're in danger, or you're
worried that something bad will happen to you.
"He's scared of spiders."
Hurt (စိတ်ထိခိုက်၊ နာကျင်)
If someone is feeling "hurt", they're feeling sad because someone has done or
said something bad to them.
"He was feeling hurt because of the way she'd treated him."
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေပေးသွားတဲ့အခါ စိတ်ထိခိုက်မိတယ်။ နာကျင်မိတယ်။
Envious (အားကျသော၊ မနာလိုသော)
If you're "envious" of someone, you want what they have. "Envious" and "jealous" are often used to mean the same feeling:afeeling of wanting what someone else has.
"I think you're just envious of her success."
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလိုဖြစ်တာအားကျတာ။ သူ့မှာရှိတာကိုကိုယ်ရချင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ပါ။ “As iron is eaten by rust, so are the envious consumed by envy" — Livy လီဗီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က “သံကိုသံချေးကတိုက်စားသကဲ့သို့ ၀န်တိုသူအား ၀န်တိုခြင်းကတိုက်စား၏”တဲ့။
Jealous (မနာလို၊ သ၀န်တိုသော)
If you're feeling "jealous", you're worried that another person might take
something from you. It's often used to describe feelings in relationships.
"Jenny felt jealous every time Pete's ex-girlfriend spoke to him."
ကိုယ့်ရှိတာကိုသူများကိုပေးလိုက်ရမှာသ၀န်တိုတာပေါ့။ ရည်းစားဟောင်းနာမည်ကိုယောက်ျားက ခဏခဏစကားထဲထည့်ပြောနေရင် အိမ်ရှင်မကသ၀န်တိုတာသဘာဝကျပါတယ်။
“Jealousy isakind of civil war in the soul, where judgment and imagination are at perpetual jars” —William Penn မနာလိုဝန်တိုခြင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်တစ်မျိုးပဲ။ ခံစားချက်နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားက အမြဲတမ်းလွန်ဆွဲနေတတ်တယ်။
ကဲဒီခံစားချက်ကလေးတွေ ကိုယ်စီခံစားဖူးကြသလား။ သေချာတာပေါ့။ လူသားတွေပဲ။ မနာလိုတာ၊ သ၀န်တိုတာ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာ၊ စိတ်ထိခိုက်နာကျင်တာတွေဟာ spices of life လူပီသစေတဲ့လူ့ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတွေပဲပေါ့။ It is not your emotions that matter, it is your reactions that matter. ခံစားချက်တွေဘယ်လိုပဲရှိရှိ ကိုယ့်စိတ်ကို မရိုင်းရအောင်ထိန်းသိမ်း တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှသာ ဘ၀ဟာနေပျော်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
Permalink Reply by Ye Naing on November 5, 2012 at 11:50
ကဲဒီခံစားချက်ကလေးတွေ ကိုယ်စီခံစားဖူးကြသလား။ သေချာတာပေါ့။ လူသားတွေပဲ။ မနာလိုတာ၊ သ၀န်တိုတာ၊ ဒေါသထွက်တာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်တာ၊ စိတ်ထိခိုက်နာကျင်တာတွေဟာ spices of life လူပီသစေတဲ့လူ့ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတွေပဲပေါ့။ It is not your emotions that matter, it is your reactions that matter. ခံစားချက်တွေဘယ်လိုပဲရှိရှိ ကိုယ့်စိတ်ကို မရိုင်းရအောင်ထိန်းသိမ်း တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိမှသာ ဘ၀ဟာနေပျော်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။
Permalink Reply by chitoo on November 6, 2012 at 18:33
Permalink Reply by Thi Thi win on November 5, 2012 at 12:05
thank you ,ခံစားချက်ကတော့အများကြီးပဲ
Permalink Reply by 0ac1hzne34owd on November 5, 2012 at 12:37
Thank you !!!!ခံစားချက်ကတော့ ပြင်ထန်တယ်ဗျားးးး
Permalink Reply by waitunoo on November 5, 2012 at 15:10
It is really good philosophy. We are now dealing with that circumstances in our everyday lives. To know how to keep our mind to be optimistic and control upon it. It is the most important things to overcome it especially when we are in difficult situations.
Permalink Reply by Ollivander Moe on November 5, 2012 at 17:30
Thsalot....
Permalink Reply by phone on November 5, 2012 at 16:08
thanks.. it's really useful for me..
Permalink Reply by UMyo Min on November 5, 2012 at 17:48
Yes.It's useful for us.
Permalink Reply by oneonekaw on November 5, 2012 at 18:46
Thanksalot,it is very useful for us.
Permalink Reply by Danuma on November 5, 2012 at 21:54
Permalink Reply by Pyone Myat Maw on November 6, 2012 at 8:11
It is not your emotions that matter, it is your reactions that matter
Read more: ခံစားချက်အဆိုးအကောင်း (Negative Emotions) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/negative-emotions#ixzz2...
Permalink Reply by jelnay83@gmail.com on November 6, 2012 at 16:49